Ciyaaraha Archives - Ceelhuur Online
Home > Archive by Category Ciyaaraha
September 10, 2019 Duceysane1388
Xulka Soomaaliya ayaa ka haray isreebreebka Koobka Adduunka ee wadamada Afrika ka dib markii ay guuldarro 3-1 ka soo gaartay Zimbabwe kulankii lugta labaad ee ka dhacay magaalada Harrare taasoo ka dhigeysa in wadar ahaan ay labada lug ku soo dhamaatay 3-2 oo ay xulka Zimbabwe ku soo baxeen. Soomaaliya ayaa ka hartay isku aadka […]
September 8, 2019 Duceysane1770
Ciyaartoyda xulka kubbada cagta qaranka Soomaaliyeed iyo mas’uuliyiin ka tirsan xiriirka kubbada cagta Soomaaliyeed ayaa gaaray magaalada Harare ee caasimada dalka Zimbabwe. Xulka Qaranka Soomaaliya ayaa lagu wadaa in ay lugta 2aad ee isreebreebka Koobka Aduunka la ciyaari doono xulka Zimbabwe talaadada soo socota iyadoo lugtii hore ay xulka qaranka Soomaaliya 1-0 uga badiyeen xulka […]
September 5, 2019 September 5, 2019 Duceysane2016
Xulka qaranka Soomaaliya ayaa uga badiyay 1-0 xulka dalka Zimbabwe lugta hore ee isreebreebka Koobka Adduunka ciyaar xiiso leh oo ka dhacay dalka Jabuuti maanta. Ciyaarta oo ka dhacday garoonka El Hadj Hassan Gouled Aptidon Stadium ayaa waxay xulka qaranka Soomaaliya qeybtii hore iyo qeybtii labaadba soo bandhigeen ciyaar tayadeeda ay aad u sareyso. Xulka […]
Gaalkacyo oo ku guuleysatay Koobka Degmooyinka Galmudug 2018 (Sawirro)
September 5, 2018 admin2146
Garoonka ciyaaraha Cabdullaahi Ciise Magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug ayaa galabta waxaa lagu soo gabangabeeyey koobka degmooyinka Galmudug 2018. Koobkan ayaa sanadkan waxaa marti galisay Gaalkacyo, waa sanadkii ugu horeeyey ee la qabto, waxaana qaban qaabadiisa iska kaashaday wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Galmudug, Xiriirka Olympic-da Galmudug iyo bulshada Galkacyo. Koobkan ayaa bilowday 26 August 2018, […]
August 27, 2018 admin1666
Garoonka Ciyaaraha Cabdullaahi Ciise ee Magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa si habsami leh waxaa uga socda tartanka ciyaaraha degmooyinka Galmudug, sanadkan waxaa la qorsheeyey in ay ka qeybgalaan ilaa 6 degmo oo kala ah Gaalkacyo, Cabudwaaq, Dusmareeb, Hobyo, Cadaado iyo Balanballe. inkastoo ay ka maqan yahay Xulka degmada Dusmareeb Caasimadda Galmudug. Galabta waxaa ka dhacday ciyaar […]
Ciyaaraha Degmooyinka Galmudug oo ka furmay Gaalkacyo (Sawirro)
August 26, 2018 August 26, 2018 admin1572
Ciyaaraha Degmooyinka Dowlad goboleedka Galmudug ayaa galabta ka furmay garoonka ciyaaraha Cabdullaahi Ciise Magaalada Gaalkacyo xarunta Gobolka Mudug. Ciyaarahan ayaa waxaa daahfuray Wasiir ku xigeenka Ciyaaraha iyo Dhalinyarada Galmudug Abshir Cabdi Shiikhow, sidoo kale waxaa goobjooga ka ahaa wasiiro, xildhibaano, Maamulka gobolka Mudug, Maamulada degmooyinka Gaalkacyo, Cadaado, Cabudwaaq, Balanbale iyo Hobyo. Ciyaarahan ayaa noqonaya sanadkii […]
Isku-Aadka Kooxaha Ciyaaraha degmooyinka Galmudug oo la shaaciyey (Sawirro)
August 26, 2018 August 26, 2018 admin1335
Xaflada Qorituurka Koobka dagmooyinka Galmudug Ayaa caawa Lagu Qabtay Gaalkacyo . Munaasibada Lagu Shaacinayay Waxaa Goob Joog Ahaa wasiir Ku Xigeena Wasarada ciyaaraha iyo Dhalinyarada Galmudug, maamulka Galkacyo, Maamulka Gobolka Mudug, Kooxaha Ka Qayb galaya Koobka iyo Wasiiro Xildhibaano iyo Dhalinyarada Sida dagmooyinka iskugu aadeen . Group(A) (1) Galkacyo (2) Dhuusamareeb (3) Balanbal Group (B) (1) […]
Jadwalka Tartanka Kubadda Cagta Degmooyinka Galmudug oo la shaaciyey
August 23, 2018 admin1609
Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Dowlad goboleedka Galmudug ayaa maanta shaacisay Jadwalka Ciyaaraha degmooyinka Galmudug oo 26 bishan ka furmaya Magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug. Ciyaarahan ayaa waxaa ka qeybgalaya 6 degmo oo kala ah : Gaalkacyo, Cadaado, Dusmareeb, Cabudwaaq, Balanbale, iyo Hobyo. Waxaana la qorsheeyey in 25 bishan ay ciyaartoydu gaaraan Magaalada Gaalkacyo, halka maalinta […]
July 18, 2018 July 18, 2018 Hafsa Haji1169
Ciyaaryahanka garabka uga ciyaara Real Sociedad Adnan Januzaj ayaa lagu soo waramayaa inuu diirada u saaran yahay xagaaga suuqa kala iibsiga kooxda Everton. Tan iyo markii uu yimid Marco Silva, Everton ayaa ku guuldareysatay inay soo iibsato ciyaaryahano kooxdoo koowaad ah, lakiin waxaa la soo jeediyay in Toffees ay haatan diyaar u tahay in kaso […]
Paul Pogba Oo Doonaya Inuu Ku Laabto Juventus
July 18, 2018 Hafsa Haji1079
Ciyaaryahanka qadka dhexe ee Manchester United Paul Pogba ayaa lagu soo waramayaa inuu go’aansaday inay u furan tahay inuu ku laabto Juventus. Sannadkii 2016, United ayaa bixisay lacag rikoorka suuqa kala iibsiga si ay u hesho Pogba oo kaga yimid kooxda Talyaaniga, laakiin 25 jirkaan ayaa kooxda Old Trafford u dhaliyay 15 gool 88 kulan oo […]